Meles Zenawi Net Worth= $3 Billion | freedomfororomo
← Ethiopia’s lasting legacy of famine
The 50th shame years of Africa Union celebration in Ireland →
One comment on “Meles Zenawi Net Worth= $3 Billion”
Lencho Tola Robi on May 30, 2013 at 7:29 am said:
Kun waan dhugaati garuu hanga kana qofa jedhee hin amanu. Inisi niitin isaasi hattuu hattuudhaa oliiti. Qabeenya oromoo saamee kan fixe wal-gargaaraniiti. Kun kan qofa isaa yoo tahe malee kan niitii waliin harka sadi ni deebi’a. Hattuu ammallee saaxluudhaa jabaadha…